Gbasara anyị - Delta Application Technics
Rootslọ ọrụ ụlọ ọrụ
Queslọ ọrụ anyị Delta Application Technics dị ka ọ dị taa, Jacques Coppens hibere na 1988. Lọ ọrụ ahụ nweziri aha Corex. Site na ahụmịhe ahụmahụ nke Jacques nwere na igwe na-emepe emepe iji tinye mmiri mmiri, n'oge na-adịghị anya azụmahịa ahụ ghọrọ ezigbo onye ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ dịka ọmụmaatụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Kedu ka Corex si dị iche na ndị ọzọ? Nhazi! E mepụtara igwe ọ bụla na njikọta ya na onye ahịa ya iji nweta ihe kachasị mma.
Na 2009 Corex sonyere Delta Engineering. Ebumnuche: ikike ịnye ọrụ ka mma, ịgbasochi anya ma na-aga n'ihu maka onye ahịa. Mmepụta igwe na ọrụ dị n’aka Delta Injinịa, na-enye ohere ka Jacques lekwasị anya na mmepe nke agbanwe agbanwe ọhụụ site na iji teknụzụ ọhụụ.
N'ụbọchị taa, otu ndị na-eto eto na-akwado Jacques, a na-ejikọ ahụmịhe na ịdị ala iji nwee ike ịchọta ụzọ kachasị mma maka usoro ndị ahịa anyị. DAT na-aguta nnukwu ìgwè dị iche iche, yana obere ụlọ ọrụ nwere obere onwe ha n'etiti ndị ahịa ya.
Anyị na-eme ka arụmọrụ gị dị mma
Dict na-agụpụta ọdịdị anyị
Ọ bụ ebumnuche anyị ịzụlite usoro dị mkpa iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ike iche onwe ha na ndị ọzọ. Ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ, akụrụngwa na-arụ ọrụ na ọrụ bụ ihe KPI anyị mgbe anyị na-echepụta igwe na azịza ọhụụ.
Kedụ ka anyị si amata nrụnye anyị? Site na imekọ ihe ọnụ, onye ahịa anyị: nzaghachi dị oke mkpa na-enye anyị ohere idozi ma melite ngwaahịa anyị. Ihe di nkpa maka oganihu anyi: ndi mmadu n’etinye aka na ike ha. Ebumnuche anyị bụ iji nweta afọ ojuju ndị ahịa site na ịdị mma n’ichepụta ogo dị elu, azịza dị ọnụ ala, mmepụta, nrụnye na nkwado nkwado ahịa. Site n'ọdịnala anyị, mbanye na nka onye ọ bụla na-arụ, anyị nwere ọnọdụ iche iche ịchọrọ ndị ahịa anyị gburugburu ụwa.